Kana iwe uri kushamisika kuti vashambadzi vari kushandisa sei zvemagariro midhiya kune avo mabhizinesi, Hubspot vakadhonza pamwechete infographic snapshot yekuisa mimwe mhedzisiro kubva kune 6,491 XNUMX vevakabvunzurudza vakapindura wongororo yakaitwa naMoz. Iyo data yakaburitswa mu yakabatana webinar pakati Hubspot uye Moz nhasi. Imwe inonakidza stat, 44.4% yevakabvunzurudzwa vakapindura vakati hunyanzvi hwavo nevezvenhau vezvenhau hwaive mu enderera or nyanzvi nhanho!
Infographic kubva: HubSpot Kushambadzira Software. Disiki: Isu tiri vanobatana neHubSpot.
Tags: advanced media mediahubspotseomozsocial media nyanzvisocial media ongororo